प्रेम र साथीमा के फरक | Jukson
तर, साथी र प्रेमी वा प्रेमिका एकै हुन् ? कसैसँग प्रेमिल सम्बन्ध नराखी मित्रता गाँस्न सकिदैन ?
कुनै विपरितलिंगी साथीसँगको हाम्रो आशक्ति कस्तो किसिमको हो ? हामीविच विशुद्ध मित्रता मात्र छ वा त्यो भन्दा बढी ? यसका लागि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । किनभने भोलिका दिनमा आउने संभावित अप्ठ्यारा वा जटिलताबाट बच्न पनि हामीले आफ्नो सम्बन्धबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
यही विषयमा चिन्ति हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खिएर आफ्नो भावनाको मुल्याङ्कन गर्नुस् र थाहा पाउनुस् की यो कति गहिरो भावना हो । तब मात्र तपाईंले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्बन्ध केवल साथी हो या साथीभन्दा पनि बढी केही हो । केही तरिका छन् जसको मद्दतले तपाई जान्न सक्नुहुन्छ की प्रेम र साथीमा के फरक छ ? ताकी तपाईले प्रेम ठानेर आफ्नो असल साथी गुमाउन नपरोस् ।
जो साथी हुन्छ उसको बारे धेरै कुरा आदानप्रदान हुन्छ । मन पराउँछ भने उसको विचार एकै प्रकारको हुने गर्छ । तर, प्रेममा यस्तो हुँदैन । यदि तपाईं कसैको प्रेममा हुनुहुन्छ भने विचार र मन अत्याधिक हुने गर्छ । जसले एक अर्कालाई आकषिर्त गरिरहेको हुन्छ । र, एक-अर्काको विषयमा अत्याधिक सोच्ने गर्नुहुन्छ ।
आफ्नो साथीसँग कुरा गर्ने तरिका र प्रेम/प्रेमिकासँग कुरा गर्ने तरिका पनि फरक हुने गर्छ । साथीसँग एक आपसमा निकै सामान्य तरिकाले कुरा गरिन्छ । एक अर्कालाई विभिन्न निक नेमबाट पनि बोलाउने गरिन्छ । जवकी जोसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, उसँग कुरा गर्ने तपाईको लवज नै फरक हुन्छ ।
ड्रिंकको ह्यांगओभर हटाउने घरेलु उपाय
डा. केसी नहुनुभएको भए ...
पोखराका दुई ठाँउमा भ्वाङ
फर्निचर किन्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् यी कुरा
कास्की जिल्ला पौडी संघको अध्यक्षमा वैभब पौडेल